संसारमा लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्कृष्ट कागजातहरू! - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / संसारमा लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्कृष्ट कागजातहरू!
धेरै डिजाइनरहरू र क्रिएटिभहरूका लागि पूर्ण रूपमा bonkers जान्छन् लेटरप्रेस प्रिन्टिंग तर के उनीहरूलाई थाहा छैन कि एक भन्दा बढी प्राप्त गर्नको लागि लेटरप्रेस पुरानो विद्यालय जस्तै मेसिन हेइडलबर्ग पवनचक्की उदाहरणका लागि तपाईंले यसलाई सही प्रकारको खुवाउनु पर्छ कागज.
त्यसकारण हामीले पछिल्लो महिना अनुसन्धान र परीक्षणमा बिताएका छौं कागजातहरू तपाईलाई सबैभन्दा उत्तम रूपमा क्युरेट गरिएको सेट ल्याउनको लागि संसारभरबाट लेटरप्रेस कागजातहरू रचनात्मक बनौं
हाउडी डू इन्टरनेट मान्छे, अस्टिन संग Print Peppermint यहाँ र आज हामी हाम्रो नयाँ हेर्न जाँदैछौं लेटरप्रेस कागज नमूना बन्डल तर पहिले द्रुत अस्वीकरण।
यो भिडियो द्वारा प्रायोजित छैन crane & co Gmund, Fedrigoni, वा अन्य कुनै पनि कागज यसमा उल्लेख गरिएको मिलहरू भिडियो। यी हुन् कागजातहरू जुन हामीले हाम्रो आफ्नै आन्तरिक परियोजनाहरू र ग्राहक परियोजनाहरूका लागि एकै किसिमको नियमित आधारमा प्रेम गर्छौं र खरिद गर्छौं र प्रयोग गर्छौं।
त्यसोभए त्यसमा डुबौं।
त्यसैले थोरै पृष्ठभूमि जानकारी सबै नमूनाहरु यस बन्डलमा दुई इन्चले साढे तीन इन्च काँटछाँट गरी एक वा दुई छेउमा छापिएको लेटर प्रेस गरिएको छ। Pantoneको धातु मसी नम्बर 10411c। यद्यपि धातुको मसी लेपितको लागि डिजाइन गरिएको हो कागजातहरू केहि प्रयोग संग तपाईं uncoated मा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्टक साथै।
अनकोटेड स्टकहरूमा प्रिन्ट गर्दा मसीको रङको भारी गाढा वा डिस्याचुरेसन अपेक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
हाम्रो सूचीमा पहिलो स्टक अपलाई हामी भाग्यशाली दिन भन्छौं यो पेपर इटालीमा Cordenons पेपर मिलद्वारा बनाइएको हो र यसलाई सामान्य रूपमा जंगली प्राकृतिक सेतो भनेर चिनिन्छ। जंगली प्राकृतिक दुई मोटाई 450 ग्राम र 850 ग्राम प्रति वर्ग मीटर मा उपलब्ध छ। द नमूना हाम्रो संग्रहमा पातलो संस्करण हो।
यो कागजमा 35 कपास र 65 तत्व क्लोरीन मुक्त क्लोरीन रहित छ काठ- मुक्त पल्प। भाग्यशाली दिन FSC प्रमाणित र पूर्ण रूपमा पुन: प्रयोग योग्य छ।
Cordenons भन्छन् कि यो स्टक कला प्रतिष्ठित थप्न, ग्रीटिंग कार्ड, निमन्त्रणा, को लागी आदर्श छ। लक्जरी प्याकेजिङ्ग, क्याटलगहरू, पात्रोहरू, मेनुहरू, ट्यागहरू, वार्षिक रिपोर्टहरू, मोनोग्राफहरू, र निश्चित रूपमा कर्पोरेट स्टेशनरी जस्तै व्यापार कार्डहरू.
यो कागज लागि उपयुक्त छ लेटरप्रेस र अफसेट मुद्रण र धेरै संग राम्रो प्रदर्शन गर्दछ परिष्करण प्रविधि सहित अन्धा नक्कल, पन्नी मुद्रांकन, थर्मोग्राफी, र सिल्क स्क्रिन प्रिन्टिङ।
अर्को स्टकलाई हामी प्रिय खुर भन्छौं र यो कागजको एउटै परिवारबाट आउँछ तर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो बलौटे हल्का खैरो रंग - फेरि नमूना 450 ग्राम प्रति वर्ग मीटर मा देखाइएको छ।
हाम्रो बन्डलमा अर्को स्टकलाई हामी शीर्ष टोपी भन्छौं यो पनि जंगली प्राकृतिक श्रृंखलाबाट आउँछ तर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रङ्गिएको छ। कालो। म कसरी को एक सुपर ठूलो प्रशंसक हुँ Pantone अनकोटेडमा छाप्दा धातुको मसी देखिन्छ कालो यो जस्तै कागजात - क्लासिक!
अब हामी इटाली छोडेर प्रसिद्ध भिजेको र खैरो युनाइटेड किंगडममा उडान गर्दैछौं। यस पेपरलाई हामी क्राउन भन्छौं तर यो प्रायः सान्डर्स वाटरफोर्ड भनेर चिनिन्छ।
यो 100 % कपास स्टक सेन्ट कुथबर्ट मिल द्वारा उत्पादन गरिएको हो र मूल रूपमा चित्रकलाको लागि पानीको रंगको कागजको रूपमा प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको थियो। वास्तवमा, यो हाल रोयल वाटर कलर सोसाइटीले समर्थन गरेको केही स्टकहरू मध्ये एक हो।
यो कागज श्रृंखला 190 ग्राम देखि 638 ग्राम सम्म मोटाई मा उपलब्ध छ नमूना हाम्रो बन्डलमा चित्रित 425 ग्राम वजन संस्करण हो।
यो स्टक दुई रंगहरू सेतोमा आउँछ जुन यहाँ चित्रित छ जुन एकदम पहेंलो न्यानो सेतो र उच्च सेतो हो जुन नामले सुझाव दिन्छ उज्यालो सेतो हो।
Saunders वाटरफोर्ड पनि तीन बनावट वा सतह उपचार hp cp र रफ हाम्रो मा आउँछ नमूना एचपी भेरियन्ट हो जसमा बनावटको सबैभन्दा सूक्ष्म मात्रा छ जसले चिल्लो थप समान सतह दिन्छ।
हाम्रो संग्रहमा अर्को पेपर अर्को पानी रंग स्टक हो जसलाई हामी युके बेल कल गर्न चाहन्छौं र नामको बावजुद जर्मनीमा हानेमुहले पेपर मिलद्वारा उत्पादन गरिएको हो।
यो 600 ग्राम स्टक सामान्यतया लियोनार्डो भनेर चिनिन्छ तीन फरक सतह बनावट कोल्ड प्रेस, हट प्रेस, र रफ मा आउँछ। हामीले यसको सुन्दर असमान उपस्थितिको लागि नराम्रो संस्करण चयन गर्यौं - हरेक पाना अद्वितीय, अद्भुत छ!
यो मोल्ड मेड पेपर 100 कपास हो जुन बुढ्यौली प्रतिरोधी छ र यसको कारणले गर्दा यसको सुरुचिपूर्ण प्राकृतिक सेतो रंग छ। मोटाइ र असमान सतह हामी तपाइँको डिजाइन को साथ लागू गर्न को लागी सिफारिश गर्दछौं लेटरप्रेस प्रिन्टिंग or पन्नी मुद्रांकन - अन्धा नक्कल पनि निर्दोष काम गर्दछ।
अब हामी हाम फाल्छौं फिर्ता सान्डर्स वाटरफोर्ड शृङ्खलाको अर्को स्टकको लागि बेलायतमा यो कागज ६३८ ग्राम छ मोटो र विशेषताहरू रफ सतह उपचार फेरि दुई प्रकारको सेतोमा उपलब्ध छ। हामीले नियमित सेतो भेरियन्ट छनोट गरेका छौं जुन न्यानो प्राकृतिक सेतो हो।
हामीले हेर्ने अर्को पेपर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेको हो र यो संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध र प्रायः प्रयोग हुने कागज हो जब यो आउँछ। लेटरप्रेस प्रिन्टिंग - हो तपाईंले अनुमान गर्नुभयो Crane बाट पत्र crane पेपर मिल - लेटरप्रेस प्रिन्टिङको लागि विशेष रूपमा उद्देश्यपूर्वक इन्जिनियर गरिएको एक अद्भुत कागज।
यो स्टक 100 कपास नरम र शानदार स्पर्श गर्न अझै स्थिर र प्रेस मा बलियो। फाइबरहरू तुलनात्मक रूपमा असंकुचित हुन्छन् जसले कागजलाई फ्लफी तर हातमा टाइट र चिल्लो महसुस दिन्छ।
Crane Lettra चम्किलो देखि न्यानो सम्म तीन रंगहरुमा उपलब्ध छ जसमा फ्लोरोसेन्ट सेतो, पर्ल सेतो र ecru समावेश छ।
फ्री दायरा फ्लोरोसेन्ट वा उज्यालो सेतो संस्करण हो र यो संग्रहमा अन्य स्टकहरू सापेक्ष सायद तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा चम्किलो सेतो हो।
Crane Lettra तीन मोटाईमा आउँछ 120 ग्राम 300 ग्राम र 600 ग्राम हाम्रो संग्रहको लागि हामीले तीन मध्ये सबैभन्दा भारी चयन गर्यौं।
हाम्रो संग्रहमा अर्को पेपरलाई हामी युनिकोर्न जादू भन्छौं। यो उही बाट मोती सेतो संस्करण हो crane हामीले भर्खरै यस स्टकको बारेमा कुरा गरेका अक्षरहरूको श्रृंखला न्यानो प्राकृतिक सेतो रंग बाहेक सबै तरिकामा अघिल्लोसँग समान छ।
अब हामी जर्मनीमा सर्दैछौं तर यस पटक तल दक्षिणतिर एउटा पेपर मिल भनिन्छ Gmund उही नामको शहरमा अवस्थित - त्यो जर्मन व्यावहारिकतालाई माया गर्नुपर्छ।
म यहाँ एक मिनेटको लागि रोक्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि यदि मेरो टाउकोमा बन्दुक थियो र म एउटा निर्माताबाट मात्र कागज किन्न सक्छु भने यो हुनेछ। Gmund.
मसँग नरम छ स्थान लागि Fedrigoni साथै, हुनसक्छ किनभने म भाग इटालियन हुँ, तर म समग्र संग्रह फेला पार्छु Gmund पेपरहरू सुपर डायनामिक, रमाइलो, र प्रतिस्पर्धी मिलहरू भन्दा बढी नवीन हुन।
Gmund कपास सेतो क्रिम हल्का खैरो हल्का निलो र पावर नीलो सहित पाँच रंगहरूमा उपलब्ध छ हल्का खैरो पनि हाम्रो बन्डलमा समावेश छ र पछि समीक्षा गरिनेछ। भिडियो. Gmund कपास चार मोटाइमा आउँछ 110 ग्राम 300 ग्राम 600 ग्राम र 900 ग्राम - यहाँ 600 ग्राम भेरियन्ट फिचर गरिएको छ।
यो 100 कपास स्टक पर्यावरण-मैत्री मात्र होइन तर यो हाम्रो बन्डलमा एक मात्र साँचो शाकाहारी कागज बनाउने कुनै पनि जनावर उप-उत्पादनहरू समावेश नगर्ने ग्यारेन्टी छ - यो मापदण्डमा फिट हुने अरूहरू पनि हुन सक्छन् तर Gmund सार्वजनिक रूपमा यो दाबी गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने एक मात्र हो फिर्ता यो माथि
लेडी जुत्ता बाट अर्को स्टक हो Gmund कारखाना तर केही अर्थपूर्ण तरिकामा अलि फरक छ। यो स्टक 100% रिसाइकल गरिएको पोस्ट-उपभोक्ता कच्चा मालबाट बनाइएको छ जसले धेरै कार्यहरू देखेको छ - त्यसैले रङ र सतहमा भिन्नताहरू आशा गर्न सकिन्छ र प्रत्येक पाना साँच्चै फरक र अद्वितीय भएकोले यस स्टकको समग्र चरित्रमा थप्नुहोस्।
Gmund कागजको यस परिवारलाई हेइडेलबर्गको लागि हेइडी छोटो भनिन्छ र यद्यपि यसले हाम्रो सूचीमा अन्य कागजहरू जस्तै कपास समावेश गर्दैन यो लेटरप्रेस मेसिनको साथ प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको थियो। यो छ मोटो तर नरम र समान रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ कुनै पनि 100 प्रतिशत कपास स्टक हुनेछ।
Heidi प्रयोग गरिएको सेतो मिल्की ग्लासाइन फेडेड ग्रे सफ्ट क्राफ्ट र डल सहित पाँच रंगहरूमा आउँछ कालो शिल्प र कालो संस्करणहरू हामी केहि पछि समीक्षा गर्नेछौं भिडियो यो स्टकले लेटरप्रेस अफसेट र सिल्कस्क्रिन प्रिन्टिङको साथ अचम्मको रूपमा प्रदर्शन गर्दछ नोट गर्नुहोस् कि कागजलाई पुन: प्रयोग गरिएको हुनाले तपाईंले उज्यालो सेतो अनकोटेड स्टकहरूको तुलनामा मुद्रित मसीमा अलि बढी रंग परिवर्तन पाउनुहुनेछ।
अर्को माथि हामी बाट फेरि आउँदै गरेको खोपडीको लागि जर्मन der Schädel छ Gmund पेपर मिल - यो तिनीहरूको कपास पेपर शृङ्खलाको अंश हो र हामीले पहिले यसको खैरो रंगलाई छाडेर समीक्षा गरेका क्लासिक फ्लोरिस्ट पेपरको रूपमा सबै समान सुविधाहरू साझा गर्दछ।
हामीले हाम्रो संग्रहको लागि 600 ग्राम संस्करण रोज्यौं र मैले भन्नै पर्छ PMS यस स्टकमा मेटालिक स्याही मात्र अचम्मको देखिन्छ यहाँ खोपडीको शीर्षमा देखिएको विवरण र कन्ट्रास्टले मलाई भित्र झन झन झन झन झन झन झन झन झन झन झन झल्काउँछ।
जम्पिंग फिर्ता Heidi रिसाइकल श्रृंखला देखि Gmund हामी संग छ कालो खरायो जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कालो हामीले पहिले छलफल गरेको पेपर श्रृंखलाको संस्करण।
हुनत Gmund यसलाई नीरस भन्छन् कालो म भन्न चाहन्छु कि यो हाम्रो लेटरप्रेस पेपर बन्डलमा रहेका अन्य दुई कालो स्टकहरू भन्दा रंगमा थोरै धनी छ, उदाहरणका लागि जंगली प्राकृतिक श्रृंखलाको एउटा।
बनावटको सन्दर्भमा तपाईंले याद गर्नुभयो कि जंगली स्टकमा 35 कपास सामग्रीले यसलाई नरम नरम अनुभव दिन्छ जबकि हेइडी गहिरो दाँतको साथ रफ हुन्छ - फेरि मलाई कालो अनकोटेड स्टकहरूको संयोजन मन पर्छ। Pantone धातु मसी।
लगभग सकियो केटाहरू मात्र दुई थप डाँठहरू जानको लागि!
यस कागजलाई डर हन्ड भनिन्छ र फेरि बाट आउँछ Gmund पेपर मिल र Heidi पुनर्नवीनीकरण श्रृंखला को एक हिस्सा हो। यसको वजन 530 ग्राम छ र हल्का खैरो वा बलौटे शिल्प रंग फिचर गर्दछ।
जंगली प्राकृतिक श्रृंखलाबाट यस बन्डलमा अन्य खैरो कागजको तुलनामा तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि Der Hund एकदम हल्का छ जसले तपाईंलाई थप कन्ट्रास्ट र राम्रो स्पष्टता दिनेछ यदि तपाईंको डिजाइनले गाढा मसी रङहरू प्रयोग गरिरहेको छ।
प्रभु मदत हामी हाम्रो संग्रहको अन्तिम पेपरमा आएका छौं र यो जापानबाट हामीकहाँ आउँछ।
मलाई यो कागजको आधिकारिक नाम थाहा छैन तर यो साकुरा पेपर मिलको हो र हामी यसलाई राम्रो कुर्सी भन्छौं। यो हाम्रो लेटरप्रेस बन्डलमा 700 ग्राम प्रति वर्ग मिटरमा रहेको सबैभन्दा घन स्टक हो।
यो सबैभन्दा भारी हुन सक्छ तर यसले यसलाई सबैभन्दा मोटो बनाउन आवश्यक छैन द्रुत माइक्रोमिटरले 36 अंक वा 0.93 मिलिमिटर देखाउँछ। हाम्रो बन्डलमा सौन्दर्यको हिसाबले सबैभन्दा बाक्लो लेटरप्रेस पेपरको शीर्षक ठूलो 52 अंक वा 1.13 मिलिमिटर मेट्रिकमा आउने एकल कलाकारलाई जान्छ।
ठीक छ, तपाइँ सबै सैनिकहरूलाई धन्यवाद जसले यसलाई अन्त्यसम्म पुर्याउनु भयो भिडियो मलाई थाहा छ सबैजनाले कागजलाई मैले जस्तो चिन्तित विषय फेला पार्दैन।
यदि तपाईंले आज देखेको कुरालाई रमाइलो लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोस् भिडियो र भविष्यको सामग्रीको लागि सदस्यता लिने विचार गर्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो वा ग्राहक परियोजनाको लागि लेटरप्रेस प्रिन्टिङ प्रयोग गर्ने डिजाइनर हुनुहुन्छ भने हामीलाई शूट गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। ईमेल info@carrieprint माpeppermint-कम
यदि तपाईंले हामीलाई एउटा राम्रो मेलिङ ठेगाना छोड्नुभयो भने हामीले तपाईंलाई यी कागज बन्डलहरू मध्ये एउटा सित्तैमा पठाउने राम्रो मौका छ।
त्यसैले आज मबाट पर्याप्त छ र हामी तपाईंलाई अर्कोमा समात्नेछौं 😉
← सिरिओ रङ (Fedrigoni) – उत्तम रंगीन कागज प्रणाली?
7 महत्वपूर्ण UX कौशल र तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने →